सुन्दर महिला किन हुन्छन् बढी धोकेबाज? यस्तो रैछ रहस्य | Rajmarga
सुन्दर महिला किन हुन्छन् बढी धोकेबाज? यस्तो रैछ रहस्य
अधिकांश युवाको दिभागमा प्रेमिका भन्ने बित्तिकै सुन्दर युवतीको छवि मडारिने गर्दछ । तर, यो सुन्दरताभित्र एउटा तीतो सत्य पनि लुकेको हुन्छ भन्ने धेरै कमलाई मात्र थाहा हुन्छ । किनभने हालै गरिएको एउटा अध्ययनका अनुसार सुन्दर महिला बढी धोकेबाज हुने गर्दछन् ।
यद्यपि यो कुरा हरकोहीमा लागु नहुन पनि सक्छ । तर, अध्ययनका अनुसार अधिकांश सुन्दर देखिने महिलाले परपरुषसँग अवैद्य सम्बन्ध कायम भएको पाइएको छ। उनीहरु धोकेबाज हुनुमा एउटा हर्मोनको असर हुने अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ ।
सुन्दर महिलाहरुमा ओस्ट्रोजन हर्मोन अधिक हुने गर्दछ । त्यसैले उनीहरु त्यही हर्मोनका कारण सुन्दर मात्र होइन अलि धोकेबाज पनि हुने गर्दछन् ।
अध्ययनका अनुसार यस्ता महिलाको धेरै पुरुषसँग सम्बन्ध रहने गर्दछ । र, उनीहरु नयाँ सम्बन्ध बनाउन पनि आँतुर रहने गर्दछन् । अध्ययनका अनुसार आफ्नो सुन्दरताका कारण यस्ता महिलाले पुरुषलाई सजिलैसँग आफूतिर आकर्षित गर्ने क्षमतासमेत राख्दछन् ।
अध्ययनमा संलग्न टेक्सस युनिभर्सिटीका डाक्टरका अनुसार यदि यस्ता महिलाले राम्रो पुरुष देखे भने आफ्नो पार्टनरप्रति निकै कम मात्रामा इमान्दारिता प्रदर्शन गर्दछन् । एजेन्सी
Previous post: सुरक्षा जाँचका नाममा अमेरिकामा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीलाई नाङ्गेझार पारेपछि….
Next post: बच्चा जन्माउन उक्साएको भन्दै विरोध